आज घट्यो सुनचाँदीको मूल्य कति पुग्यो हेर्नुहोस - Nawalpur Dainik
काठमाडौँ, १२ वैशाख। साताको पहिलो दिन आइतबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य ४ सय रुपैंयाले घटेको छ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाला सुन प्रतितोला रू. ९१ हजार ३०० मा कारोबार भएको छ ।
शुक्रबार छापावाला सुन प्रतितोला रू. ९१ हजार ७०० मा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै, आज तेजाबी सुन प्रतितोला रू. ९० हजार ८०० मा कारोबार भईरहेको छ।
यता, आइतबार चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ। शुक्रवार प्रतितोला १३ सय २० रुपैंयामा कारोबार भएको चाँदी आइतवार १० रुपैंयाले घटेर १३ सय १० पुगेको महासंघले जनाएको छ ।
यो पनि पढ्प्रनुस देशसभाका ३९ सांसदमध्ये ३७ प्रदेशसभा सदस्यले मतदानमा भाग लिएका थिए । प्रस्तावको विपक्षमा १५ मत मात्र परेको छ । एक प्रदेशसभा सदस्य भएको राप्रपा भने तटस्थ बसेको थियो ।
देशसभामा मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा मतदान हुने दिन एमालेले मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सांसदलाई हृवीप जारी गरेको थियो ।
Posted in विजनेश
Prev2 दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ, ॐ लेखि सेयर गरौं
Nextच’म’त्का’री हुने गर्दछ यो विरुवा, घरको यो दि शामा लगाउनु धनको कमि कहियै हुदैन